UBuyiselo olutsha lokuHamba kuthatha iEvolution
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Icandelo lokungenisa izihambi » UBuyiselo olutsha lokuHamba kuthatha iEvolution
Ngowama-2022 siza kubona inkqubela eqhubekayo yokubuyela kwimeko yesiqhelo njengoko ishishini lehotele lisabela kwiimfuno eziguqukayo zomhambi “omtsha”.
Iihotele ziya kufuna ukubona kwangaphambili kunye nokuguquguquka kokulawula
ukuguquguquka okuqhubekayo. Kodwa imiceli mngeni yeminyaka edlulileyo ilungiselele iihotele kakuhle ukuba zibambe amathuba azayo.
Iimfuno kunye neminqweno yomkhenkethi omtsha ineempembelelo kwiihotele njengoko ziseta izinto eziphambili ngobuchule kunye nezibonelelo ezigxilwe kunye notyalo-mali ukuzalisekisa ngokufanelekileyo iimfuno zeendwendwe. Ngo-2022, ukuphinda kwakhiwe abasebenzi, ukuphinda kabini ukuzinza, kunye nokucinga kwakhona ukunyaniseka kuya kuba ziindawo eziphambili kwiihotele ezifuna ukufaneleka kumhambi omtsha.
Ukwakha kwakhona abasebenzi beHotele kwiXesha elitsha lokuHamba
Imiceli mngeni yabasebenzi ikuthintele ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwiihotele ezininzi kwilizwe liphela, nto leyo eyenza kube nzima ukuphendula kwimfuno ekhulayo. Ngelixa phantse yonke imizi-mveliso yafumana ukunqongophala kwabasebenzi kulo nyaka uphelileyo, ukunqongophala bekumandla kakhulu kwiihotele ngenxa yobhubhani wokuyeka ubhubhani kunye namaza abantu abashiya ngokuzithandela, rhoqo befumana amathuba kwamanye amashishini.
Iziphumo zovavanyo lwamalungu e-AHLA ka-Okthobha ka-2021 zibonakalisa indlela emaxongo ngayo imeko ngoku.
Phantse bonke (94%) abaphendulayo bathi iihotele zabo azinabasebenzi abambalwa, kubandakanywa ne-47% abathi abanabasebenzi abancinci. Ngaphezu koko, i-96% yabaphenduli bazama ukuqesha kodwa abakwazanga ukugcwalisa izithuba ezivulekileyo.
Njengoko ishishini lehotele liqhubeka kwindlela yokubuyisela ngo-2022, ukuphinda kwakhiwe iqula letalente kuya kuba yimfuneko ekukhonzeni iimfuno zomhambi omtsha. Ngapha koko, i
Ishishini kulindeleke ukuba liphelise ngo-2022 phantsi kwe-166,000 yabasebenzi xa kuthelekiswa no-2019.37.
Ukuqesha abasebenzi kuya kuba nzima ngakumbi kumashishini amaninzi anikiweyo
Iindaba ezimnandi kukuba kukho ithuba lokutsala kunye nokugcina abasebenzi abatsha
iindlela. Oku kunokuthetha ukwakha kwiinzame ezikhoyo zokufundisa abantu malunga nazo zonke
amakhondo ekhondo anika umdla kunye nokubonelela ngophuhliso lwekhondo lomsebenzi kunye noqeqesho olufanelekileyo lwezakhono.
Abagqatswa banamhlanje bakhathalele amakhondo ekhondo lomsebenzi, amalungiselelo omsebenzi abhetyebhetye, kunye noqeqesho lwezakhono ezibenza bahlale beqesheka kwixesha elizayo. Iihotele zikwanalo nethuba lokomeleza iyantlukwano yazo kunye nezenzo zokubandakanywa, ukukhuthaza imisebenzi yabantu bebala kunye nabasetyhini kunye nokuqinisekisa ukuba abasebenzi kuwo onke amanqanaba bahluke njengeendwendwe zabo.
Ukuphinda kabini phantsi koZinzo kuBantu kunye nePlanethi
Njengoko abakhenkethi abatsha bejonge ukwenza ishishini ngeempawu zehotele ezihambelana nenjongo yabo yobuqu, ukuzibophelela kweehotele kuzinzo kuya kuba nefuthe kakhulu kwizigqibo zokuthenga. Uphando lwamva nje lwehlabathi lwabahambi lubonisa ukuba iindawo ezintathu eziphezulu abathengi bacinga ukuba iinkampani zokuhamba kufuneka zigxininise kule ndawo kukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni, ukuhlaziya, kunye nokunciphisa inkunkuma yokutya. Bakwanomdla kwizenzo ezijongana neeplastiki ezisetyenziswa kanye, inkunkuma yamanzi, kunye nokugcinwa kombane.
Ngabanini beehotele basaziva uxinzelelo loqoqosho lwendyikityha kunye nesidingo sokubeka phambili inkcitho kwizinto ezisisiseko zokugcina ishishini liqhuba, utyalo-mali kuzinzo kunokubonakala ngathi yinto ephambili ekhawulezileyo.
Ukanti iihotele akunyanzelekanga ukuba zenze ukhetho phakathi “kokwenza into elungileyo” kunye nokwenza into enengqondo yemali xa kuziwa kuzinzo.
Injongo kukulungelelanisa utyalo-mali oluzinzileyo kunye neembuyekezo zemali ukuhamba ngaphaya kweendleko ezilula zokuthobela. Utyalo-mali kwiinkqubo ezihambelanayo, ezichazwe ngokucacileyo, kunye nokubonelela abanini ngembuyekezo yemali eqinileyo-nokuba ngoyilo lwehotele eluhlaza, ukuqhuba amandla ombane ngokusebenzisa iinkqubo zokwakha, okanye ukubandakanyeka kwizivumelwano zokuthenga amandla avuselelekayo egameni labathengi-kuya kuba ngumthetho kunokuba ngumthetho. ngaphandle kokukhetha njengoko abahambi abatsha betsalela kwiimpawu ezixabisa uzinzo kunye noxanduva loluntu.
Ukucinga Ukunyaniseka Okungaphaya Kwamanqaku
Iiprogram zokunyaniseka ezijolise kwiimfuno zabahambi bezoshishino kwaye zisekelwe ngokuyinhloko kwiindawo eziqokelelweyo ziya kuba zincinci kakhulu. Okuyimfuneko ngoku iinkqubo ezilungiselelwe abantu abahamba kancinci nangeenjongo zokuzonwabisa. Imeko kwindawo: NgoSeptemba ka-2021, i-41% yabahambi e-United States bebendwendwele usapho kunye nabahlobo, kwaye i-41% bebeseholideyini. Basisi-8% kuphela ababekwiihambo zezoshishino, kwaye i-6% yayisiya kwindibano okanye inkomfa enxulumene nomsebenzi.
Inyani yeyokuba izikimu zokuthembeka ezisekwe kumaxesha amaninzi ohambo azihambisani nokuziphatha komhambi omtsha kunye nemeko yemfuno ecinezelweyo. Kwaye nanjengoko imfuno ithatha kwiinyanga ezizayo kunye neminyaka, umxube weshishini kunye nohambo lokuzonwabisa luya kutshintshwa ngokusisigxina, kwaye iinkqubo zokunyaniseka kufuneka zihambelane nokuziphatha kwangoku kwabahambi ukuze bazibandakanye ngokwenene.
Iihotele ezibuyisela iinkqubo zokunyaniseka kutshintsho lweepatheni zemfuno entsha zezona ndawo zingcono zokwakha ukunyaniseka. Oku kuthetha ukubalwa kwemodeli yamava, imodeli yedatha, kunye nemodeli yeshishini. Zonke ezi nxalenye zisebenza kunye ukwenza iinkqubo zokunyaniseka ezisekelwe kwiimfuno zabantu ngelixa zixhasa imiba yokusebenza yokuhambisa kuzo.
Oku ngakumbi: ihotele | Umsebenzi | Sustainability | eunited States
Izigulana zemiphunga zixhamla kwiZixhobo zokuJonga izigulana ezikude eunited States|
Ihotele yaseSanya iCetyiselwe siSikhokelo sokuHamba seForbes ngo-2022 ihotele|
Iindlela zokukhwela ibhayisekile zeentaba eziqhagamshelwe ngoku eunited States|
ihotele Sustainability eunited States Umsebenzi
I-Indiya irhoxisa amakhulukhulu oololiwe abakhweli ukuba bahambe...
I-St. Maarten ibhengeza amanyathelo okuqala kwi "Transition...
Ama-30 amatsha e-UK, eItali, eSwitzerland, eJamani, eFransi...
Yimela amaGcisa aseUkraine, Uxolo, Inkululeko ye...
I-126 yezigidi zeMisebenzi eMitsha elindelekileyo kuKhenketho kunye noKhenketho...
I-Turkish Airlines kunye ne-Air Serbia zibhengeza ukwabelana ngekhowudi entsha...
Ujongo lweMarike yoFakelo lwamathambo eyenzelwe wena...
Abantu baseCanada bacele igalelo labo kwiWestJet's...
I-Swiss Graubunden ifuna abakhenkethi abaninzi abasuka kwiGulf...